Apple Music inoburitsa rondedzero yevakanyanya kuteererwa muna 2021 | IPhone nhau
Apple Music inoburitsa rondedzero yevakanyanya kuteererwa muna 2021
Gore rakapera uye Ndeipi nzira iri nani yekutora zvakanaka nezvakaipa zvegore rino redenda (Tinoda kusanganisa izwi rekutumira) umo masevhisi ekutepfenyura akatiperekedza zvakanyanya. Gore rizere mimhanzi iyo Apple Music yanga ichida kuita zvishoma nekugovana zvinyorwa nevanonyanya kuteererwa pachikuva. Nziyo dzinonyanya kuteererwa, dzakanyanyiswa, dzakaimbwa zvakanyanya ... ramba uchiverenga kuti tinokupa zvese zvese zveiyi mitsva yeApple Music playlist.
Sezvatinokuudzai, zvino pakupinda muApple Music tichakwanisa kuona mitsva yekutamba inotarisa pane inoteererwa zvakanyanya mukati megore ra2021.. Gore "risingawanzo" iro rakazara nemimhanzi yakanaka yatinowana (mukutevedzana kwenziyo dzinoteererwa): Dynamite neBTS, License Yevatyairi naOlivia Rodrigo, Nzvimbo naAriana Grande, ZveHusiku (kutya. Lil Baby & DaBaby) naPop Smoke, kana Blinding Mwenje neKupera kwevhiki. pakati pevakawanda.
Hapana mubvunzo Rondedzero yeTops iyo yandinonyanya kufarira ndeyePamusoro zana Shazam, rondedzero umo tinogona kuona mumhanzi wakanyanya kuridzwa Shazamed, kureva kuti, rondedzero ine zvinonzwika zvakanyanya pasirese uye iyo isina kufanirwa kuve yakadhindwa paApple Music. Ndosaka tichiona misiyano nePamusoro zana yekubereka iyo mukupedzisira inomisikidzwa nekwakabva vashandisi veApple Music nenzvimbo yavo.
Zviripachena hatigone kukanganwa kuti rondedzero idzi dzakabatanidzwa ne Epamusoro zana enziyo dzinotariswa zvakanyanya (nziyo dzakanyandura karaoke dzedu zvakanyanya), kana Idzo dzepamusoro zana dzenziyo nenyika, pakati idzo Spain iri pachena.. Uye hongu, kana tikapinda iyo Teerera tebhu tinogona zvakare kuona yedu Yepamusoro zana inoteererwa zvakanyanya nziyo. Uye kwauri, idzi nziyo dzekutamba dzinodzosa ndangariro dzakanaka here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Apple Music inoburitsa rondedzero yevakanyanya kuteererwa muna 2021
Twitch inoburitsa iyo yakamirirwa kwenguva refu SharePlay chimiro paIOS
Blackbox, imwe puzzles yemahara kwenguva shoma